Valentine Day မှာ တခါမှ Surprise မရဖူးတဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Tameelay
Valentine Day မှာ တခါမှ Surprise မရဖူးတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
Valenday Day နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို ရှိထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် Cele ဖြူဖြူထွေးက ခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်…
” အမှန်​အတိုင်း​ ပြောရလို့ ရှိရင်​ Valentine’s Day နေ့မှာ အဲ.. Valentine’s Day surprise ဆိုတာ မ​ပြောနဲ့ Birthday Surprise တောင်​ တခါမှ မရဖူး ပါဘူး ”
” Birthday မှာလည်း အဲ့လို ကိတ်​ကြီး​တွေ ခွဲပီး တခါမှ မလုပ်​ဖူး ပါဘူး ”
” တခါပဲ 10 တန်း အောင်​တုန်းက … အဲ့ဒါ​တောင်​ birthday မဟုတ်​ပါဘူး… ၁၀ တန်း စာ​မေးပွဲ အောင်​​တော့ ရန်​ကုန်​က​နေ ကိတ်​ကြီး ဝယ်​သွားတာ … အဲ့ဒါကို ရွာမှာ ခွဲပီး အသက်​ကြီးတဲ့ သူတွေကို တတုံးစီ လိုက်​​ဝေ ပေးတာ ”
” အဲ့တာပဲ ဆယ်​တန်း​ အောင်​တုန်းက ကိတ်​ ခွဲဖူးတာ​ပေါ့ ”
” ငယ်​ငယ်​​လေးထဲ က​နေ အခုချိန်​ထိ ကိတ်​တခါမှ မခွဲဖူး​သေး ပါဘူး ”
” ရည်းစား က​တော့ မထား​သေး တာ​တော့ မဟုတ်​ပါဘူး …. ဘယ်​လို​ ပြောရမလဲ မရတာ​လေ ရမှ မရတာ ထားမ​နေ​တော့ ဘူး​လေ …
ပြီး​တော့ သမီးကို ကြိုက်​မဲ့ လူလည်း မရှိဘူး ထင်​တာပဲ …. ဟုတ်​​လောက်​ တယ်​ မရှိ​လောက်​ဖူး ”
” နောက်​​ကျရင်​​တော့ မသိပါဘူး အခု​တော့ အပျိုကြီး လုပ်​ဖို့ပဲ စဉ်းစားထား ပါတယ်​ ” တဲ့…
source cele 7
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ GOOD KISSE မှာ ဟော့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံ ( ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ကြည့်ရအောင် )
Rocker အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းက လတ်တလောမှာ သူ့အမြွှာသမီးလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို တက်တူးထိုးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သူဝေတို့မိသားစုလေးကတော့ အရမ်းအားကျဖို့ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ကတော့ ဖေဖေလင်းလင်းနဲ့ မေမေချစ်သုဝေတို့ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလင်းလင်းက သူခေါင်းစားနေတဲ့ စကားလုံးရဲ့အဖြေကို သိရှိလိုက်ရပြီလို့ ပြောပါတယ်။ လင်းလင်းက “ကျနော်ခေါင်းစားနေတဲ့ …